TomàsBigordà | | စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း, နေရောင်ခြည်, ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင်
လျှပ်စစ်ကားပေါ်သို့ကားတစ်စီးတည်းစီးနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ လေကြောင်းလိုင်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတောင်ညွှန်ပြနေသော်လည်း၎င်းကိုညွှန်ပြသည် နှစ်ပေါင်းအနည်းငယ်သိသိသာသာအဖြစ်မှန်ဖြစ်လာဖို့ယနေ့ခေတ်တွင် BMW i3၊ Nissan Leaf တစ်ခုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းများပေါ်တွင်တက်စလာကိုတွေ့ရစဉ်။
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Wright Electric သည်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်းလျှပ်စစ်လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရန်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားစွာချမှတ်ခဲ့သည်။ ခရီးသည် ၁၅၀ တင်ဆောင်နိုင်ပြီးမိုင် ၃၀၀ အောက်သာပျံသန်းနိုင်မည်။ (၄၈၂ ကီလိုမီတာ)မက်ဒရစ်ကိုဘာစီလိုနာနှင့် (၅၀၄ ကီလိုမီတာ) ကွာဝေးသည့်အကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။
ယခုအချိန်တွင် Wright Electric သည် Easyjet နှင့်ပူးပေါင်းရန်သဘောတူညီမှုရှိပြီး ၁၀ နှစ်အကြာတွင်၎င်း၏ကတိတော်ကိုပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ရန်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်အချို့သောအသံများသည်အကောင်းမြင်ခြင်းမရှိကြပါ။ ပြproblemsနာကြီးနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကစွမ်းအင်သိုလှောင်ထားတဲ့ဘက်ထရီကိုသူတို့ရဲ့အလေးချိန်နဲ့အတူယူတာပါ။ ဒုတိယတစ်ခုမှာလက်ရှိဓာတ်ပေါင်းဖိုများကဲ့သို့စွမ်းအင်ရှိသောအင်ဂျင်များရရှိရန်ဖြစ်သည်” ဟု Alejandro Ibrahim ကပြောကြားသည်။ Teruel လေဆိပ်၏လေယာဉ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဒါရိုက်တာ.
Wright Electric ၏အစီအစဉ်မှာတိုတောင်းသောလမ်းကြောင်းများဖုံးလွှမ်းရန်အတွက်တိကျသောကဏ္ at ကိုရည်ရွယ်သည့်ဂိုဒေါင်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤလေယာဉ်အမျိုးအစားများသည်နီးကပ်စွာပြောင်းရွေ့ခဲ့သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က $ 87.000 ဘီလီယံဤအရာအလုံးစုံ Boing နှင့် AirBus ကရောင်းချ 967 လေယာဉ်တင်။
မက်ဆာချူးဆက်တွင်တည်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီသည် MIT လေ့လာမှုကိုလေ့လာခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်ပျံသန်းမှုတိုသည် 'ကျဉ်းမြောင်းသော' လေယာဉ်ပျံတို့တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ခရီးသည် ၁၅၀ လောက်ကိုသူတို့တည်းခိုနိုင်မယ့်မော်ဒယ်တွေ၊။ အောက်ပါဇယားတွင်ဤမျဉ်းကြောင်းများသည်သင်္ဘောအမျိုးအစားများမှသွားသောအကွာအဝေးသည်အတိအကျဖြစ်သည်။ One Wright Electric သည်လည်ပတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်, နှင့်စပိန်အတွက်, ကမက်ဒရစ်ကနေကျွန်းဆွယ်အတွင်းလေဆိပ်အမြောက်အမြားမှခရီးသွားလာခွင့်ပြုလိမ့်မယ်။
ဒီအဘို့, ကုမ္ပဏီအဆိုပြုထားသိရသည် သင်ကပြောင်းလဲမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတွက် 10 နှစ်စီမံကိန်းကိုလျှပ်စစ်နည်းပညာ n သည်၎င်း၏လမ်းပြမြေပုံကိုအမှတ်အသားပြုသည်။ အကယ်၍ ဘက်ထရီ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်လုံလောက်စွာတိုးတက်လာပါက၎င်းတို့သည်လုပ်နိုင်သည် 100% လျှပ်စစ်လေယာဉ်ပျံကိုတည်ဆောက်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်လိုအပ်သောသိပ်သည်းဆကိုမရရှိလျှင်၎င်းတို့အကြားအရောအနှောကိုလောင်းနိုင်သည် သင်္ဘောရဲ့ဘက်ထရီကိုအားသွင်းတဲ့ရိုးရာမော်တာတွေ ဒီကနေ့သူတို့ဟာ Chevrolet Volt (သို့) Opel Ampera တို့လိုကားတွေလိုလျှပ်စစ်မော်တာကိုမောင်းနှင်လိမ့်မယ်။
Wright Electric ၏နည်းဗျူဟာသည်လေဆိပ်အာဏာပိုင်များ၏စည်းမျဉ်းများနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသောရိုးရာဒီဇိုင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည် အကွာအဝေး ၄၅၀ ကီလိုမီတာအကွာရှိကျဉ်းမြောင်းသောကိုယ်ထည်လေယာဉ်များဖြင့်ပျံသန်းသောခရီးစဉ်၏ ၃၀% ကိုခွင့်ပြုနိုင်သည်။ ဈေးကွက်ရှယ်ယာသည်ဒေါ်လာ ၂၆၀၀၀ ခန့်တန်ဖိုးရှိသည်။
ကုမ္ပဏီ၏အတွေးအခေါ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရည်မှန်းချက်ကြီးသည့်တစ်ခုတည်းသောကုမ္ပဏီမဟုတ်ပါ အလယ်အလတ်ကာလ၌လျှပ်စစ်ခရီးသည်လေယာဉ်။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က Siemens နှင့် Airbus သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးလေယာဉ်ပျံထုတ်လုပ်ရန်သဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ရာ ၂၀၃၀ တွင်ခရီးသည် ၁၀၀ အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလိမ့်မည် ဤအဝိသေသလက္ခဏာများတစ်ခုလေယာဉ်ပျံ၌ပျံသန်း။ "လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပျံသန်းမှုဟာကျွန်ုပ်တို့ခေတ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးစက်မှုစိန်ခေါ်မှုတွေထဲကတစ်ခုပါပဲ" ဟုသူကပြောကြားခဲ့သည် တွမ်အဆုံးသတ်, ဥရောပမှာရှိတဲ့အဲယားဘတ်စ်၏စီအီးအို
Easyjet တွင်အခြားစီမံကိန်းများလည်းရှိသည် သင်၏ပျံသန်းမှုများ၏စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန် နှင့်, စကားမစပ်, CO2 ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချ။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည်ကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ၎င်းကိုသိမ်းဆည်းရန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆဲလ်များအသုံးပြုခြင်းကိုဖြတ်သန်းသည် တစ်နှစ်လျှင်လောင်စာဆီတန်ချိန် ၅၀၀၀၀။ ဘယ်လိုလဲ? လေယာဉ်ကိုဆင်းသက်ရန်ဆင်းသက်စဉ်ယာဉ်ဘရိတ်ချိန်တွင်စွမ်းအင်သိုလှောင်ခြင်း မြေပြင်လေ့ကျင့်စဉ်အတွင်း။ ဒီစစ်ဆင်ရေးအမျိုးအစားကိုသာသူတို့စားသုံးကြဘူး Easyjet ထက် 4% လောင်စာ တစ်နှစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Bertrand Picard သည်ကမ္ဘာပတ် ၀ န်းကျင်သို့ပျံသန်းသော Solar Impulse II ၏လေယာဉ်မှူးတစ် ဦး ဖြစ်သည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်က poweredတစ်ချိန်တည်းမှာပင်အတားအဆီးကိုလည်းထားရှိပါ။ ၁၀ နှစ်အတွင်းတွင်ခရီးသည် ၅၀ ကိုတိုတိုနှင့်အလတ်စားလေယာဉ်များဖြင့်သယ်ဆောင်မည့်လျှပ်စစ်လေယာဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလိမ့်မည်။ အီဘရာဟင်သည်ထိုနယ်စပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းမြင်မှုမရှိပါ။ တစ် ဦး လေယာဉ်ပျံ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောကာလ၏မေးခွန်းတစ်ခုသည်:“ ဒါဟာနည်းနည်းအကောင်းမြင်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းမှသည်အသိအမှတ်ပြုခြင်းအထိ ၁၀ နှစ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းကို EASA နှင့် FAA [ဥရောပသမဂ္ဂနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏လေဆိပ်အာဏာပိုင်များ] သို့လွှဲပြောင်းသောအခါ သင်ပြီးသားလေယာဉ်အတွက်သတ်မှတ်ရန်ရှိသည် မင်းဘာလုပ်မှာလဲ အီဘရာဟင်၏စကားအရလေယာဉ်ပျံတစ်စင်းအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကြံဆတီထွင်မှုအားတားဆီးပေးသည်။
ဤအပိုင်းသို့ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ကိုထည့်သွင်းရမည်။ «အလွန်ကြီးမားသောတောင်ပံများဖြင့်ပျံသန်းနေသည့်လူတစ် ဦး ဖြစ်သည့် Solar Impulse သည်အတူတူမဟုတ်ပါ 80.000 ကီလိုဂရမ်တစ်လေယာဉ်။ ပထမတစ်ခုမှာလျှပ်စစ်မော်တာတစ်ခုရှိသင့်တယ်ဆိုတာစိတ်ကူးကြည့်ပါ၊ အခုအချိန်မှာ ဂျက်လေယာဉ်နှင့်တူညီသောစွမ်းအားရှိသည့် propellant မရှိပါ။
ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကအဲယားဘတ်စ်သည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသောဟိုက်ဘရစ်လေယာဉ် E-Fan ကိုပျံသန်းခဲ့သည် လေထဲတွင်မိနစ် 30 (ကလောင်ကျွမ်းခြင်းအင်ဂျင်မှကျေးဇူးတင်စကားကို ၂ နာရီခွဲခန့်အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်) တ ဦး တည်း vအမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း 220 ကီလိုမီတာ တစ်နာရီ ယနေ့အထိအမြန်ဆုံးယာဉ်မှာ Long-ESA ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်တစ်နာရီလျှင် ၃၂၆ ကီလိုမီတာအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။
အင်ဂျင်၏ဒီဇိုင်းကိုသူတို့ရှိစေရန်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည် လျော့နည်းအလေးချိန်နှင့်ပိုပြီးပါဝါ။ နှင့်ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုအကြီးအကျယ်တိုးတက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကီလို ၁၅၀၀ အလေးချိန်ရှိသောကားတစ်စီးတွင်ပြaနာမဟုတ်သော်လည်းလေယာဉ်ပျံ၌မူကားတင်ဆောင်ရမည့်ပမာဏကိုလျှော့ချသောကြောင့်ဖြစ်သည်” ဟုအီဘရာဟင်ကပြောကြားသည်။ Tesla ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Elon Musk ကထိုအချိန်တွင်လျှပ်စစ်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူဘက်ထရီများထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် 400 Wh / ကီလိုဂရမ်တစ်သိပ်သည်းဆ။ ပိုမိုမြင့်မားသောသိပ်သည်းဆတက်စလာသည် ၂၅၀ Wh / kg ထိရှိသည့်ဘက်ထရီများရှိသည်ဟုသံသယရှိသည်။
ဘက်ထရီကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကြောင့်ဆယ်နှစ်တာ Wright Electric ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုမဖြစ်နိုင်ပုံမပေါ်သင့်ပါ သူတို့ရည်မှန်းချက်ကြီးထက်ပိုပုံရသည် အောင်မြင်ရန်လျှပ်စစ်ခရီးသည်တင်လေယာဉ်သည်ဥရောပမြို့များကိုစည်းလုံးစေနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းဘာစီလိုနာမှမက်ဒရစ်သို့လောင်စာမပါဘဲ